China Waste Plastic Pulverizer 75kw Motor Kit Ukwenziwa kunye nefektri | Xinrui
Ifanelekile ngeplastikhi yentsimbi, ibhodi yebhanti, iinkuni zendalo, umgca we-engile, ucingo lwamatye eplastikhi, iprofayile, udonga, ipayipi, i-XPS, itemplate yokwakha, ibhodi egwebu, i-SPC, umgangatho we-WPC, i-resin tile
Ukusetyenziswa1_Isiphatho sebhodlo sachithwa saza sacocwa.
Ukusetyenziswa2_ Isitulo sikaloliwe satyunyuzwa saza sagutywa.
Ukuguqulwa rhoqo kwikhabhathi yombane
Umxhasi oqinileyo wemagnethi 250W
Ukungabinanto kunye nokususa i-ayina
Amandla omoya oMbane 7.5W
insimbi okupholisa umbhobho
I-DIA 1200mm yokujikeleza kwesikrini
ucime fan 1.1KW
Pulse uthuli okanye ingxowa yokususa isihluzi
Ezi zokuluka ezimbini isityumzi zeplastiki ziqhutywa ngokuzimeleyo ziimoto ezimbini ukujikeleza ngaphambili nasemva. Iimela ezihambayo zokuluka ziluma enye nenye ukwenza uchebe, incam yemela ehambayo kunye nomphezulu wesilinda semikhono yendlela yokucheba, kunye nokuqina kunye nokuhamba ngesantya kwifom yokuluka, ukuze ufezekise umphumo otyumkileyo. Ngenxa yokubandakanyeka ngokuhlangeneyo kweemela ezihambayo, umsebenzi wokutya okuzenzekelayo unokufezekiswa, kunye nesakhiwo se-cutter shaft esikhethekileyo sinokuwuphepha umcimbi wokujija kwesixhobo okanye izixhobo zokuvimba kwinkqubo yemveliso yesantya esisezantsi kunye netorque ephezulu, ukuphucula imveliso ukusebenza ngokufanelekileyo.
1. Ngokubanzi, i-12mm baffle isetyenziswa kurhwebo olunye. Kodwa ubukhulu bepleyiti edidayo yomatshini wethu wokubamba yi-18mm.
Imibhobho yethu yokupholisa yenziwe ngentsimbi engenasici. Xa kuthelekiswa neemveliso zexabiso elifanayo, ezinye iifektri zisebenzisa i-iron endaweni yoko.
Umahluko phakathi kwe-55KW kit kunye ne-75KW kit
1. Ukuguqula rhoqo ikhabethe yombane ye-75KW inokhuseleko olungcono kumatshini kune-Star-delta ebangela ikhabethe yombane ye-55KW kit.
2. Amandla emoto 75KW anemveliso ngakumbi kuneemoto ezingama-55KW.
3. I-DIA 1200mm ejikelezayo eshukumayo yekhusi ye-75KW kit, inkulu kune-55KW ngeenxa zonke yesikrini, umthamo omkhulu.
Ipharamitha yemoto engama-75KW
I-2970 r / min
Ukufakwa kwimizuzu nje. Kulula ukulandela isikhokelo kunye nevidiyo yokufundisa.
Imoto, iwaranti yekhabhinethi yombane yonyaka omnye, ikhontrakthi yomamkeli iminyaka emibini. (Zinxibe iinxalenye kunye nokusebenza okungaqhelekanga okubangelwa sisiphoso akukho ngaphakathi komda wewaranti.)
Ukupakisha ifilimu okusongelweyo
Egqithileyo Iplastiki yePulverizer 55kw yeeMoto
Okulandelayo: I-PVC Pulverizer 90KW yezixhobo zeemoto